Ilay rapper malaza malaza Chris Brown dia niantso an'i Eudoxie Yao hanaovana vady - TELES RELAY
Eudoxie Yao dia nanambara tamin'ny 2012 fa efa nangatahin'i Chris Brown, ilay mpanamory amerikana malaza, izy, ho an'ny fanaovana masedavy amin'ny efitrano fandraisam-bahiny iray any Etazonia. Nandritra ny fotoana ela dia ny mpampiasa Internet dia nino ny famoronana go bobaraba mba hanomezana ny heviny momba ny tranonkala sy hiseho eo amin'ny lafin-javatra.
Valo taona taorian'ity andiany ity, ilay miantso ny tenany hoe Doxy Rover ankehitriny dia niverina tamin'ity lohahevitra ity izay nahamaika ny lohateny lehibe. Ny fisehoan'ny fahitalavitra RTI amin'ity talata 23 jona ity, ny Hottentote Venus an'i Babi dia manamafy fa niantso an'i Chris Brown: "Nandeha tany Etazonia aho satria mila massage, ary izaho no olona nanao an'io. Fantaro fa manam-pahaizana matihanina aho, ary manana ny diplaoman'ny fahazoan-dàlana amin'ny CAP (Certificat de Professional Aptitude.) Raha mifady aho, dia tena mahafaly ahy izany, satria mahalala ny tenako aho. Talohan'ny nampidiranao tao amin'ny media sosialy dia asan'ny mpanao hatsaratsara izay nataoko. Ka tonga teo anoloan'ny efitrano fandraisam-bahiny tao amin'ny trano fandraisam-bahin'i Chris Brown aho ho an'ny fivoriana fiterahana… ”
Ary ny mpanao gazety nanontany an'i Eudoxie hoe inona ny fihetsik'izy ireo tamin'ny fahitana an'i Chris Brown, ilay kintana amerikana lehibe. Nanampy i Doxy Rover:
- Milamina aho rehefa nahita azy. Fa kosa somary nihorakoraka am-pifaliana aho rehefa nahita an'i Didier Drogba!
Nambaran'i Eudoxie amintsika fa tamin'io andro io izy dia nifankahita tamin'ny olo-malaza Amerikana, Didier Drogba no nanatrika, ary izy irery ihany no nahavita manaitra ny hafanam-pony. Nambarany ihany koa fa tonga ny Puo-tiana, mpihira Nizeriana. Raha nanontaniana ny fomba nandeha ny lamina Chris Brown, dia namaly i Doxy Rover:
- Tamin'ny farany, tsy afa-nandady aho. Teo i Rihanna, ary nakatony ny varavarana rehefa nifanena izahay. Fa ny orinasako kosa no nomeko ny mpiasa…
Eudoxie dia manondro ihany koa fa ny vidiny mitsangana dia mitsangana amin'ny $ 100 ho an'ny olona iray. Ny saran'ny birao ara-dalàna nataony tamin'i Abidjan izay mitentina 50.000 CFA franc ihany no azony.
Noho izany dia afaka nikarakara ny staff an'ny Chris Brown izy, afa-tsy ilay rapper malaza malaza. Dia ahoana, ahoana no nahatonga an'i Rihana izay sakaizan'ny mpihira tamin'ny fotoana nanakatonana ny varavarana tamin'ny fahitana ireo endrika elefanta avy amin'ny masseuse avy ao Babi? Mety ho lasa Ex's Chris Brown haingana izy raha nahazo an'i Eudoxie navela hanao ny asany? Ka tsy maintsy nitahiry ny fahaizanao ve ianao?
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://afriqueshowbiz.com/eudoxie-yao-chris-brown-ma-fait-appel-pour-un-massage/
Fifandonana mahery vaika teo amin'ny kodiaran'ny Santa Rosa de Lima sy ny mpitandro ny filaminana meksikanina